Dubai ndiyo yakanakisa nzvimbo yebasa, maitiro ekuwana basa
Nei Dubai iri nzvimbo yakanakisa yebasa?
Kubhadhara mabasa mu2018 Dubai City
Isu tiri kuunganidza mabasa muDhaibha uye Abu Dhabi
Dubai ndiyo nzvimbo yakanakisisa yebasa?
Dubai ndiyo yakanakisa nzvimbo yebasa? Nei izvi zvaitika? Sezvineiwo. Dubai imwe yenzvimbo dzakanakisa pasi. Hapana mubvunzo wakabvunzwa, wega basa rekuvhima anotarisa kuti aiswe muDubai. Uye pamusoro peiyo basa muUAE ndiyo yakanaka nzira yemitero yepamusoro-yemahara zvachose. Asi kuti uwane basa muEmirates. Unofanirwa kuve munzvimbo a Basa reArabic rinopa basa basa nekutsvaga nzira dzekutengesa iwe pachako complete guide.
Dubai zvakare inzvimbo yekutengeserana zvakanyanya. Kune vazhinji vezvematongerwo enyika, Mhuri mhuri dzehumambo, uye varidzi vebhizinesi. Ino inoshamisa nzvimbo kwayo zvakanyanya uye zvakanyanya kunaka guta rose revanhu vanobva kunze kwenyika. Kune rimwe divi, Dubai City yakave inozivikanwa seguta rakanyanya kutaridzika kune vanotsvaga mabasa vekunze. Nechinangwa chehupenyu munyika yeArabic, ino nzvimbo ndeimwe yezvakanakisa uye maererano yehupenyu neyakavanzika hupenyu. Pakati peEmirates bhizinesi, iwe unogona kuwana mabasa anoshamisa anopiwa kubva kuvashandi.
Dubai ndiyo nzvimbo yakanakisisa yekushanda muEmirates?
Sezvo mufananidzo weEmirate wellness. Iyi nzvimbo inova 5th yemaguta akakurumbira munyika. Imwe pfungwa inokosha iyi guta rinokurumidza kuva inonyanya kushanyirwa nzvimbo kuti vabati vakanyanya kushanda. Kuisa imwe nzira panzvimbo pe kuenda uye kuwana basa munzvimbo dzakaoma senge Singapore, London, uye Paris. Kunyangwe nenzvimbo dzakatarwa yepamusoro dzekushanya pamwe neNew York, Hong Kong, Doha, Mumbai.
Mu 2018 Dubai ranking harigone kukura kwehupfumi uye bhizinesi zvitsva. Zvakakoshawo zvakaringana kukwezva kwakazara kwevanhu vedzimwe nyika. Nechiratidzo chimwe chete ichi Guta inzvimbo yekurota basa idzva unhu uye mararamiro ehupenyu uye mari yekurarama. Kushanda muUAE. Kambani yedu inopa zano a job search engine in Dubai uye nzvimbo yekutsvaga webhusaiti. Zvechokwadi zvakakosha kushandisa neCV yako.
Nei Dubai iri yakanakisa nzvimbo yebasa semaneja. Nekuti iwe unogona kuwana basa nekukurumidza!.
Maguta ari muUnited Emirates
Chokutanga, zvakanakisisa zvakarongeka muUAE misha itsva vakapedza kudzidza uye vatorwa vatsva mu2018. Zvechokwadi, Abu Dhabi inzvimbo yakakura yebasa mukutungamira, Dubai, uye Sharjah zvakare inokurudzirwa pakati pemaguta akakurumbira kuti agare muArabic Business World.
MuC2018 uye 2019 mune zvekupedzisira kuongororwa anotsanangura mahara ku Dubai nzvimbo yakanakisisa yevatariri. Uye pasi pemamiriro akadaro kana iwe uchitsvaga yakanaka yebasa mukana mune manejimendi. Unofanira cherekedza guta iri serakanakisa munyika. Makurukota emutungamiri uye, Chef Executive Maofficial vanowana kunyange nani mabasa anopa. Mumamiriro ezvinhu akadaro zvirinani mabasa mikana yevakuru maneja level, C-level maitisa achaita gamuchira hupenyu hwese huri nani uye zvakanyanya nani uye kukwikwidza mihoro enzanisa kune vamwe.
Kwemakore, vekutsvaga basa rakakura kutsvaga mabasa mukati mafuta uye gasi. The vashandi vezvemabasa vanouya ku Dubai senzvimbo inonyanya kuda basa munyika. Kune ivo kuwana basa muBud Dhabi kana kuDhaibhi ndicho chinhu chakanakisisa chave chichiitwa mubasa raunyanzvi.
Kune rumwe ruwoko anenge anenge ari pedyo vanotsvaka basa kubva kuIndia kutarisa zuva rose nokuda kwe8,000 mafuta uye gas mabasa emikana. Pamusoro pevashandi veDha Dubai vanoda kupindura kune vashandi vose vanoshandira. Izvozvi zviri mupfungwa zvichitarisa nguva dzose kune nzvimbo itsva yepaIndaneti basa nekuda kwekudzidzisa mabasa emashoko pamusoro pebasa. Vane tarenda vanowanzogadzirira kuisa Dubai vashandirisi mahofisi pamusoro pekunyora kwemahofisi emabasa.
Tourist Attractions ku Dubai
Guta rakanakisisa pane nyika inove Dubai muUnited Arab Emirates. Nzvimbo yepamusoro yevashanyi pazororo uye nzvimbo inopisa yemabasa. Pane nzvimbo dzakawanda muguta. Sezvineiwo, vashanyi vatsva vanoda nzvimbo ino nekuda kwekukwira kumusoro uye mashopu anotenga. Asi kuti uwane basa muDubai unofanirwa kuve ne visa yekushanda. Padivi rakashata, iwe unoda kuziva kuti ungawana sei basa.
The Dubai mutongi yakashandura dunhu rose kubva kuHurumende diki kuita mubatanidzwa wakakura. Dubai yatama kubva kunzvimbo renje kuenda kune rimwe remaguta akanaka kwazvo pane zvepasi. Zvizhinji zvezvinokwezva uye kwekuenda zvinounza zvimwe uye zvakawanda vashanyi kuUAE. Kwete chete iwe unogona kuputika mumhenderekedzo yegungwa asi iwe unogona kutsvaga kutengesa mabhizinesi.
Zvose zvakapoteredza muEmirates, iyo yakanaka yezuva. Panguva imwecheteyo, UAE ndiyo nzvimbo yakanakisisa yemhuri inofadza. Musoro we UAE inzvimbo yakakurumbira yekutsvaga. Vanhu vanoda nzvimbo ino nekuda kwezvikwereti zvakadai seBurj Khalifa. Uye iyi ndiyo yepamutemo chivakwa chepasi refu pane GCC. Asi kunyanya, nzvimbo dzinogona kuva dzakakosha kumhuri yako. Somuenzaniso muenzaniso mukurumbira weA Dubai shopping mall.
Dubai yedu yakanaka inogara ichisvika yakakwana kune chero munhu. Iwe unogona kusarudza dzinoverengeka dzinoyevedza kubva ku mammoth aquariums uye yemukati ski mitsetse. Kuzviisa neimwe nzira, guta iri rine zvakawanda zvetsika zvakakwirira mutsika kune vashanyi uye vanovhima basa. Kune zvinhu zvakawanda zvekuita munzvimbo dzose dzeEmirates. Iyo motokari munzvimbo ino ndiyo inonakidza uye ine mazuva ano ekuwedzera-ons.
Dubai ndiyo nzvimbo yakanakisisa yebasa, edza kuwana basa seExpat.
Mabasa kuMiddle East
The Emirates Government zvakare inotsigira avo vanoenda kune dzimwe nyika muDha Dubai mukuwana basa. Vanodzokera kuEmirates vangada kuwana uye kushandisa mari yavo yemafuta mukati mekunoshamisa Dubai uye Abu Dhabi. Vatungamiriri vetarenda repasi rese vanogamuchirwa muEmirates. Vazhinji makambani muDubai kubatana neSingapore, New York, uye London Human Resource Capital Makambani.
Makambani ekutungamira ekuunganidza seAdecco, Bayt uye GulfTalent nevamwe vazhinji. Inotungamira iyo UAE pamberi pedzimwe nyika nekuda kwekutsvaka chinangwa. The zvakanakisisa mabasa ari mune mafuta-based sector. Nokuda kwechikonzero ichi hupfumi muGulf States uye kuMiddle East senharaunda yeNXXUMA yekukwezva vatungamiriri vatsva. Iko tarenda yakanakisisa nguva dzose kutsvaga makambani muUAE. Uye ikoko unogona kuwana mikana yemabasa pasi rose semukadzi.
Kazhinji kutaura vamwe vanotsvaga basa zvinogona kushamisika. Izvo kwete chete Dubai yakaverengerwa senzvimbo yepamusoro yekushanda muAAE. Expats zvakare ratidziro chaizvo Shariya uye Abu Dhabi. Global kutsvaga basa kuri kuwanikwawo kana iwe kugara mumakambani Emirates uye Saudi Arabia.
Mukufamba kwenguva, vatungamiri vebhizimisi veguta reMuguta nevakuru vanoita zvisarudzo ndivo vanhu vakuru mumashoko evanhu vane hutungamiri hwekutonga. Kune chikamu chikuru chebasa, vatsvaki vanoziva kushandiswa kwenyika ino. Vashandi vekutora vanoendesa vatorwa vakawanda kuti vasarudze Dubai uye Abu Dhabi senzvimbo yekurarama, kushanda nekushingaira kufarira hupenyu hwavo munyika yebhizimisi yeArab.
Nei Dubai iri nzvimbo yakanakisa yebasa? Nekuti kazhinji maExpats anowana basa ipapo.
Mazano ekuwana basa muUAE
Pasi pemamiriro ezvinhu avo vanotsvaka basa panzvimbo yebasa remahofisi nzvimbo. Iye zvino achisarudza mawebsite ekubhadhara. Nokuti kana mumwe munhu ave achishanda mu Dubai kwemakore anopfuura 10. Iine mikana yakawanda yekuwana basa mumusika weEmirates yemukana wemabasa. Hazvishamisi kuti ivo zvechokwadi kuwana basa muUAE sezvo Pakistani inotsvaga. Kunyange mabasa emabasa akadai se CEO uye Management Director (MG). Kana MBC boka uye Mutungamiri weInsead Alumni Association muUAE.
Kune chikamu chikuru chebasa, vakatsvaka vakagadzira nhamba huru dzevashandi vanokwanisa. Uye ivo vari kuuya kuzoshanda muUAE gore negore. Panguva imwecheteyo, vakawanda vanowedzera basa kubva kuIndia ndivo kugara kwenguva yakareba yenguva muEmirates. Mufaro wemusika weinjiniya unokoka vanhu vakawanda gore rega rega. Dubai Guta rinoita kuti nzvimbo dzese dzivepo kune vabati vepasi rese. Iri rinoshamisa guta reArabhu rinoita rinomanikidza musanganiswa we basa rinoshamisa uye mararamiro ari pakati vanhu vazhinji.
MuEmirates, kazhinji kutaura, kune akawanda mikana inonakidza mu2020. Mabasa muDubai anozivikanwa zvikuru uye kuvaka basa nemakambani mazhinji muRudume rako. Unofanira kuva yakatanga nehunyanzvi hwemhando yepamusoro mukati meUAE. Makambani akanakisisa pano muDubai makambani epasi rese. Kwaunokwanisa kusimbisa mazwi akawanda kwenguva refu kuMiddle East.
Yousuf Almulla the Chief Strategy Officer kuDubai Holding, Iye munhu mukuru mune Dubai Bhizinesi ndiani UAE yenyika uye EMBA alumnus. Kutaura nguva dzose pakubvunzurudza kwavo nezvezvakabuda zveAUE expats. Basa iri muUAE rinogutsa zvikuru kune mamaneja nevatungamiriri vanotungamira. UAE ndiyo nyika dzavanotsvaga mabasa kwenyika uye vavhimi vekubasa. Nharaunda nguva dzose kusimuka kuti ugamuchire kuzivikanwa kwakadaro.
Mabasa mu Dubai haasi nyore kuwana
Sezvakangoitika, Dubai City Company inosarudza kudya kwemasikati mabasa anokosha. Uye kune rumwe rutivi, isu tiri kubatsira vanoedza basa muGulf Countries seQatar neSaudi Arabia. Sezvo 2009 isu tiri kubata avo vanotsvaga basa career applications. Mune tariro kuti vanotsvaga basa vanotsvaga basa vanowana basa idzva muQatar kana Saudi Arabia.
Kune rumwe rutivi, Dubai City Company inokurumidza kushanda nzvimbo yakanakisa yebasa uye Nha. 1 career provider muUAE. Saka wese anotsvaga basa anogona kuodha CV yeDubai Mabasa. Kazhinji kutaura basa muMiddle East zvakaoma kuwana. Uye izvo munhu wese anoziva. Asi nechirongwa chedu cheMedia Media manejimendi, zvichave nyore kuwana. Kana iwe tanga kutengesa iwe pachako pamusika webasa reUAE unogona kuwana nyore a basa muDubai City.
Panguva imwe chete, vazhinji vanotsvaka basa vanoisa CV kune webhusaiti yedu nehuwandu hwe MBA. Uye mune iyi kesi, akawana basa kuDubai. Zvakakosha kuti uzive kana uri kutsvaga kuwana basa muUAE. Shandisa masevhisi edu uye tiwane basa nekukurumidza ndapota shandisa yedu yekutanga Tumira chikamu. Padivi rakanaka kana uchitsvaga basa rekutungamira. Isu tiri kupa mabasa akanaka ekutsvaga mabasa muUAE. Iwe unofanirwa kuisa curriculum vitae kumumiririri wedu ku Dubai City Company.
Sei Dubai ndiyo yakanakisa nzvimbo yebasa uye itsva expats?. Nekuti vanhu vanotarisira basa muAFA.
Dubai City Kambani iri kubatsira vanotsvaga basa kwete muUAE chete. Tiri kubatsira zvakare kuwana basa muQatar, Saudi Arabia, uye Egypt. Pane rimwe divi, isu tiri mamwe emasaiti ebasa remabasa kuMiddle East. Uine izvi mupfungwa, mutsvaki webasa anogona kurodha kutangisa kuDubai City Company. Sangano redu kutarisira mabasa ekushanda mukati meimba. Vose vanoedza basa vanogona kutumira Curriculum Vitae. Kunyanya ku vachengeti masangano eIndia. Uye mapoka emakambani epurogiramu emabasa edu muDhair na Abu Dhabi. Ichashanda zvakanaka kwauri.
Pamusoro pezvo munhu wese anotsvaka basa kubva kuIndia nePakistan achiisa Resume. Pachava nemashoma masarudzo aunosarudza. Vanotsvaga kubva kune imwe nyika mumusika wemabasa vanogona kuendesa yavo vita vitae. Nzira yakanyanya kunaka ndeyekuisa CV kune vanochera vashandi uye makambani eHR. Nzira yekuchenjera ndeye zvakare kutora iyo yekutanga yekugadzika sarudzo uye kutsvaga basa muAEE. Uye kwauri, semuvhimi webasa uye expat inzira yakanaka kwazvo yekutsva kwemararamiro.
Pasi pemamiriro ezvinhu, uchapupu yakapiwa neDhailand City Company. Vose vanoedza basa vanogona kuwana basa rakabhadharwa zvakanaka muBud Dhabi. Nokuda kwechikonzero ichi, vanotsvaga basa vanowanzoreva vanokwanisa kuwana basa vachishandisa Dubai City Company.
Nei Dubai iri akanakisa nzvimbo webasa nebasa rako?. Vatongi vanogadzirisa yakabhadhara basa muUSA.
VaIndia nePakistan vanoedza basa
Sangano redu rinobatsira vanotsvaka basa zvikuru kubva kuIndia nePakistan. Munhu wese mutsva anonyora basa ravo. Zvechokwadi, gamuchira a job search tool. Saka neizvozvo, ivo vachakwanisa kubatana nemasangano ekuunganidza, vakuru venzvimbo, manejimendi ekutungamira muDubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, uye Egypt. Zvakare tarisa kuresort guide muUnited Arab Emirates.
Dubai City Company ndiyo inonyanya kushandiswa kushanda muUnited Emirates. Kuti tiise imwe nzira, isu tiri kubatsira zvose zvekutsvaga nekuvhima basa nokuvaisa muUAE. Tichitarisira vanhu vemarudzi ose vanofarira vauya kubhengi. Nei Dubai iri nzvimbo yakanakisisa yekushanda sevaIndia nePakistani ?. Vanhu vanogamuchira visa yebasa muUAE. Nenzira chaiyo.
Pane rimwe divi, iwe uchanzwa uchiponeswa muDubai. Mapurisa anoshamisa muDubai uye Abu Dhabi.
Saka kana uri kutsvaga basa mu Dubai?
Dubai ndiyo nzvimbo yakanakisisa yekushanda sekuti expat ?. Vatsvaki veJobho vanowana basa muUAE.
Iye zvino unayo zvese ruzivo nezvehupenyu muAU. Iwe unofanirwa zvirokwazvo kuedza yedu basa search services yehotera. Kambani yedu muDhaibha isangano rakanaka uye rakatendeseka. Tirikubatsira kuwana basa kuI Dubai company uye kuwana basa nokukurumidza mukati meUnited Emirates.
Ndokureva, isu tiri vamwe iyo yakanakisa mararamiro einopa ruzivo muDubai mu2019 uye tariro iyo kambani yakanakisa mune ramangwana 2020. Chikwata chedu chiri kutsvaga nezvenhau dzezvino nyanya basa nekuzvitumira paBlog redu muDubai. Imwe pfungwa yakakosha kana iwe uri kutsvaga basa uye uri exat iwe unofanirwa teerera rutsigiro kumusoro kumakambani uyo anogara kuDaily City.
Dubai City Company ndiyo inonyanya kambani yekutsvaga vatungamiriri vemabasa. Saka kana uine ruzivo rwebhizimisi seC-Level tinokwanisa anokupa mikana inoshamisa yekuita mu Dubai. Basa redu rekushanda rinotarisira basa kutsvaga vatungamiri vakuru mukati uye kunze kwe Dubai kune vatungamiriri vakuru.
Vose vanoedza basa vanofanira funga Dubai City nokuda kwebasa idzva. Emirates is the nzvimbo yakanakisisa yevatorwa kune IT uye Google jobs. Dubai ndiyo nzvimbo yakanakisisa yebasa Ita CV yako kune kambani yedu.
Dubai ndiyo nzvimbo yakanakisisa yekushanda semushandi
Tsvaga basa kuDubai Guta!
Kuchengetwa kwevashandi muUAE
Tsvaga Mamwe ruzivo nezve Dubai? Zvinoshamisa kuti iwe unogona kuwana izvozvo. Kungotanga a itsva basa mukati Dubai!
Upload Resume Kunokurumidza Kukura Guta Pasi Pano! - Dubai City.